» जल शक्तिको उपयोगमा नेपाल–बंगलादेश–भारत त्रिदेशीय साझेदारी गर्नुपर्छ
———— सूर्यनाथ बास्तोला, जलस्रोत बिज्ञ तथा योजनाविद्
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लामो योगदान पुर्याई सफल योजनाकारको रुपमा परिचय बनाउन सफल सूर्यनाथ बास्तोला जीवनको उत्तराद्र्धमा पनि जलशक्तिको उपयोग र योजना निर्माणमै व्यस्त छन् । पूर्वी नेपालको इलामको तल्केनी भन्ने स्थानमा १९९० साल बैशाख ८ गते जन्मेका र हाल ८७ पुगिसकेका बास्तोलाले आजभन्दा ६३ वर्ष पहिले इन्जिनियरिङ चार वर्षे डिग्री उत्तीर्ण गरी ३० वर्ष नेपालको सरकारी सेवामा बिताएका एक अनुभव जलस्रोत विज्ञ तथा योजनाविद समेत हुन् ।
नेपालका पुराना र सफल जल सम्पदा निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका बास्तोला जलआयोजनाका डिजाइनर हुन् । पछिल्लो समय विश्वका कैयौं विश्व विद्यालयमा गेष्ट लेक्चररको रुपमा अध्यापन गराउँदै आएका छन् । हाल कोरोना लकडाउनमा घरैमा बसेर जल सम्पदाको उपयोगबारे रणनीति बनाउँदै गरेका बास्तोला नेपाल–बंगलादेश–भारतीय त्रिदेशीय साझेदारीमा यस क्षेत्रको जल सम्पदाको अधिकतम् उपयोग हुने ठोस योजना बनाउनुपर्ने अभियानमा छन् । नेपालमा पानी जहाज चलाउनुपर्दछ र यो सम्भव छ भनेर सो सम्बन्धी विचार प्रस्तुत गर्ने बाँस्तोला अझै पनि नेपाल–भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय साझेदारीको आधारमा बंगालको खाडी हुँदै ठूला पानी जहाज नेपाल भित्राउन सम्भव रहेको र नेपालका जल सम्पदामा भारत–बंगलादेशलाई सहभागी गराएर लगानी र बजारिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । हालसम्म दर्जन जति कृति, आर्थिक विकास र जलस्रोत सम्बन्धमा पुस्तकहरु लेखेको बाँस्तोला आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ, प्रतिस्पर्धा साप्ताहिकले उनै बाँस्तोलासँग लिएको अन्तर्वार्ताको सार संक्षेप ।
कोरोना महामारीपछि विश्वकै अर्थतन्त्र संकटमा छ, नेपालमा पनि अप्ठेरो पर्नसक्ने त्रास छ कसरी विश्लेषण गर्नुभा छ ?
कोरोना महामारीले विश्वलाई अक्रान्त पारेको छ । यो एउटा प्राकृतिक नियमित घट्ना हो । यसले अर्थमन्त्रमा योजना बनाउँदा कुनै एउटा विशेष क्षेत्रलाई मात्रैमा ध्यान दिनु हुदैन बरु विविधिकरणतर्फ सोच्नुपर्दछ भनेर सिकाएको छ । नेपालको जल सम्पदाको उपयोग र कृषिको उपयोग साथै पर्यटनलाई जोडेर तीन वटा क्षेत्रलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन सकेमा भविष्यमा ठूलो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त हुँदै गएको छ, अब कसरी अघि बढ्ने ?
पर्यटन नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै ध्वस्त भएको छ । अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई धेरै नै कठिन भइरहेकोछ । तर, आत्तिने होइन, धैर्य गरेर अघि बढ्नु पर्दछ । कोरोना महामारीको खोप वा कुनै विधिद्वारा अन्त्य हुने वित्तिकै पर्यटकहरु तान्न विश्वका विकसित देशहरुका बीचमा नैठूलो होडबाजी चल्नेछ । त्यसको लागि हामीले देखि नै तयारी गर्नुपर्छ । अहिले पूर्वाधारहरु विकास गरेर ठीक्क पार्ने, खुल्ने वित्तिकै विशेष प्याकेजहरु ल्याएर पर्यटक भित्राउन सकिन्छ । आजकलको जनामा डिजिटलमा गइसकेको छ । प्रचार प्रसारको तयारी गर्ने, आतिथ्यको तयारी गर्ने हो । पर्यटन मात्रै भनेर पनि भएन । अब विस्तारै पर्यटनसँगै कृषि जोड्ने, कृषिसँग जलस्रोतका अन्य विधा जोडेर लैजानुपर्छ । कृषि पर्यटन, कृषिका पकेट क्षेत्रहरु बनाएपछि पर्यटकहरु आएर कृषिको पकेट क्षेत्रको पनि भ्रमण गराउन सकियो भने कृषि उत्पादन बिक्री गर्न पनि सकियो अनि देखाएर पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिन पनि सकियो । यस्तो खालको बहुआयामिक सोच्नुपर्दछ ।
कृषि र पर्यटन अनि जलस्रोतलाई जोड्ने भन्नु भाको चाही कसरी हो ?
अबको समयमा पर्यटनलाई केही कठिन छ । त्यसो भन्दैमा पर्यटनलाई बन्दै गर्ने भनेको होइन, त्यसलाई पनि जोगाउने साथै थप कृषिलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने भनेको हो । यसको एउटा एकिकृत प्याकेज बनाउनु पर्छ । कृषि पर्यटनमा केन्द्रीत हुने भनेको हो । फेरि पुरै कृषि पर्यटन भनियो भने अर्को अर्थ लाग्छ, अहिलेसम्म हिम श्रृंखलामा मात्रै देखायौं, हिमाल खोलानाला पनि देखाउनु पर्छ । अब ति खोलाहरुमा स्थानीय जनतालाई आवश्यक बिजुली त्यही उत्पादन गरेर पनि देखाउनु पर्छ । अनि त्यो हिमालको फेदीमा कृषि पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्दा हिमाल हेर्छन, हिमालको फेदीमा फलेको खान्छन्, यसले थप आम्दानी र थप समृद्धि हुन्छ । कृषि, पर्यटन र जल सम्पदाको एकीकृत विकासको योजना अघि सार्नुपछ भन्ने मेरो भनाई हो । कृषि उत्पादनलाई नेपाली हावापानी सुहाउँदो मौलिक प्रविधिको विकास, नवितम प्रविधि र मलबीऊको प्रयोगमा जोड दिएर सफल पार्नुपर्दछ । कृषिमा लगानी बृद्धि गर्ने नीति हुनु जरुरी छ । अब पूर्वाधार र सडक विकासमा भन्दा कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्दछ । त्यस्तै हिमाल क्षेत्रमा साना साना जल सम्पदा उपयोगका योजनाहरु ल्याउनु पर्दछ । अर्को कुरा हाईड्रोपावरको मेगा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्छ । त्यो मेगा प्रोजेक्ट बहुउपयोगी बनाउनु पर्दछ । जलविद्युत आयोजना र त्यही आयोजनाबाट निस्केको पानीले ठूलो मात्रामा जमिनमा सिंचाई पु¥याउन सक्ने योजना बनाउनुपर्दछ । सिंगो नदिमा ४०÷५० मेगावाटको हाईड्रोपावर बनायो सकियो भन्ने अहिलेको विकासे संस्कृतिलाई बदल्नुपर्छ र अब हाईड्रोपावर र सिंचाईलाई परिपूरक बनाउनुपर्दछ । हाईड्रो पावरको नाममा यताको नदि उता लैजाँदा तल्लो तटिय क्षेत्रका जनताले पानी नपाएको अवस्था समेत छ । अब विकासको परिभाषा बदल्नु पर्दछ र जलद्यिुत र सिंचाईलाई परिपूरक बनाएर अघि बढाउनु पर्छ । अनि त्यसमा पर्यटन जोड्नुपर्छ भनेको हो ।
त्यसैले नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय साझेदारीमार्फत यो काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । सम्वभ छ । यसको लागि नेपालले नेतृत्व लिनुपर्दछ । नेपालको जल सम्पदा र जलविद्युत भारत र बंगलादेश दुवैलाई चाहिएको छ, नेपालमा उत्पादन भएको जल विद्युत भारत र बंगलादेशलाई दिने र उनीहरुले नेपालमा आउने पानी जहाजलाई रुट दिने कुरा जम्मा यति त हो ।
कोशी नदिमा पानी जहाज ल्याउने कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ, त्यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
मैले नै सुरुदेखि उठाउँदै आएको छु । नाकाबन्दी भन्दा पहिलेदेखि नै मैले विभिन्न अन्तर्वार्ताहरुमार्फत भन्दै आएको छ । यो योजना दक्षिण एसियाकै मेगा प्लान हुन्छ । नेपालको आर्थिक समृद्धि पनि यसले ल्याउँछ । यो नेपालको मात्रै चासो र मेहनतले सम्भव हुने कुरा होइन । तर, नेपालको नेतृत्वमा सम्भव हुने कुरा हो । नेपालको कोशी नदिमा पानी जहाज ल्याउन दिन भारत तयार हुनुपर्दछ । बंगलादेश तयार हुनुपर्दछ । त्यसैले नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय साझेदारीमार्फत यो काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । सम्वभ छ । यसको लागि नेपालले नेतृत्व लिनुपर्दछ । नेपालको जल सम्पदा र जलविद्युत भारत र बंगलादेश दुवैलाई चाहिएको छ, नेपालमा उत्पादन भएको जल विद्युत भारत र बंगलादेशलाई दिने र उनीहरुले नेपालमा आउने पानी जहाजलाई रुट दिने कुरा जम्मा यति त हो । नेपालको जल विद्युतलाई लगानी र बजार दुवै चाहिएको छ, लगानी उनीहरुलाई नै हाल्न लगाउने । बजारिकरणको लागि भारत र बंगलादेश छदैछ । यही साझा हितमा समझदारी बन्न सक्छ । विद्युत पानी बाँडफाँड र नियन्त्रणमा नेपालको हित हुने गरी प्रस्तुत हुन सक्नुपर्दछ । यो योजना नेपालले अघि बढाउनुपर्दछ । तर आफ्नो स्वार्थलाई रक्षा गर्न सक्ने गरी गहिरो अध्ययन गरेर प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्दछ । नेपालले आफ्नो जलस्रोत अध्ययन र विकास गर्न छुट्टै जलशक्ति रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्नुपर्दछ । सरकारले वाटर पावर कमिशन गठन गरेर सोही कमिशनमार्फत यस विषयमा भारत र बंगलादेशसँग मिलेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । पहिला नेपाल अघि बढ्नुपर्दछ ।
अहिलेको विद्युत प्राधिकरण भन्दा माथि अर्को निकाय चाहिन्छ भन्न खोज्नु भाको ?
प्राधिकरण भनेको कम्पनी जस्तै काम गर्दै आएको छ । अब अथोरिटी समेत छैन । यो मोडलबाट माथि उठ्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अथोरिटीसँग डिल गर्न सक्ने शक्ति सम्पन्न वाटर पावर कमिशन बनाउनु पर्दछ । यसले योजना र नीतिहरु तर्जुमा गर्छ । नेपालको जलस्रोतको उपयोगलाई अझै प्रभावकारी, जनताले लाभ पाउने गरी अघि बढाउनु पर्दछ । त्यसको लागि लगानी बोर्ड वा त्यस्तै एउटा निकायमार्फत जलस्रोतको पहिचान तथा अध्ययन हुनुपर्दछ । देशमा के कति आयोजना बनेका छन् ? के कति पाईपालाईनमा छन् ? सो कुराको एउटा डाटाबेस तयार गरेर बाँकी रहेको जलशक्तिको नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेर छुट्टै प्लान बनाउनुपर्दछ । हाईड्रोपावरमा धेरै गफ मात्रै भयो । हचुवाको भरमा आयोजनाहरु बने, लगानीकर्ताहरु अन्योलमा छन् । विद्युत आयोजना तयार भयो, उत्पादन सुरु भइसक्यो, प्रशारण लाइन छैन । यस्तो समस्या आउनु हुँदैन । विगतमा लोडसेडिङको समयमा जथाभावी जलविद्युत कम्पनी निर्माण गर्न अनुमति दियौं, त्यसले कतै भद्रगोल त भएको छैन ? अध्ययन गर्न जरुरी छ । हालको प्रगति त्यति सन्तोषजनक देखिदैन । यसलाई तीव्र बनाएर जनता र देशले लाभ लिने गरी अघि बढाउनुपर्दछ ।
सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
आजसम्म राजनीतिक अस्थिता थियो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक यति लामो समयसम्म सरकार चल्यो । यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा किचलो निकालेर खेलोफड्को गर्नेहरुको दुईटै गालामा नेपाली जनताले हानेको झापड हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निर्णयहरु बोल्ड छन् । बोल्ड यस मानेमा कि उहाँका निर्णयहरु पेण्डुलम हुनु परेको छैन । रेल भन्नु भकोथ्यो, रेल त आयो त । अब विस्तारै बन्दैछन् । एकै पटक सबै देख्न पाइदैन । ठूला आयोजनाहरुका काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यत्रो महामारी छ, विश्व स्तब्ध छ, नेपालमा स्तब्ध हुनुपर्ने गरी ठूलो असर परेको छैन । महामारीमा विश्व अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ नेपालको अर्थतन्त्र झन बलियो देखिएको छ । महामारीमा विश्व चिन्तामा हुँदा नेपालले भैरहवा विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी, फास्ट ट्रयाकको काम धमाधम गरिरहेको छ, रोकिएको छैन । लामो समय जर्जर भएको ठाउँमा यो भन्दा बढि के चाहियो, चाहिएकै पाउनुहुन्छ, तर समय लाग्छ । प्रधानमन्त्री ओली रातदिन खटेर काम गरेको देखिराखेको छु । यो नेपालको ऐतिहासिक घटनाक्रम पनि हो । अरु सरकार भएका भए यत्तिको प्रभावकारी, यत्तिको पारदर्शिता, यत्तिको बोल्ड निर्णयहरु पाउनुहुने थिएन । यसो भनेर म सरकारको तारिफ मात्रै गर्दिन, मेरा केही सुझावहरु पनि छन्, सरकार स्थिर भएन, नीति नियमहरु राम्रोसँग लागू भएनन्, त्यसैले विकास भएन भन्यौं, अब त्यसो भन्ने ठाउँ छैन । अबका प्रत्येक सेकेण्ड सरकारका लागि महत्वपूर्ण छ । देशमा समृद्धि र विकास जनताले भोग्न अझै पाएका छैनन् । आर्थिक समृद्धिलाई क्यास (नगद) मा रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ । प्रजातन्त्रमा आर्थिक विकास दिन्छौं भनेर हिजो जनताको साथ खोज्यौं, तर विकास र समृद्धि टाठाबाठाहरुले मात्रै लिइरहेका छन् । यसलाई विस्तारै बदल्नुपर्ने छ । त्यसको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० वर्षे योजना तयार गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । विकासको श्रृंखला नै तयार गर्नुपर्दछ । विकास र समृद्धिको डेलिभरी मोडल बदल्नुपर्नेबेला भएको छ । प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नेलाई सत्ताको वरिपरि घुम्ने अधिकार छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले भुराभुरीको कुरा सुन्ने पनि होइन । विज्ञता हासिल गरेको, एकाडेमिक व्यक्तिहरुसँग लजिकको आधारमा बहस गर्ने र उपयुक्त कुराहरु लागू गर्दै जानु पर्दछ । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि मुलुकले स्थिरता पाएको छ, विकासपथमा मुलुक अघि बढेको पनि छ तर यो गति पर्याप्त होइन ।
म सरकारको तारिफ मात्रै गर्दिन, मेरा केही सुझावहरु पनि छन्, सरकार स्थिर भएन, नीति नियमहरु राम्रोसँग लागू भएनन्, त्यसैले विकास भएन भन्यौं, अब त्यसो भन्ने ठाउँ छैन । अबका प्रत्येक सेकेण्ड सरकारका लागि महत्वपूर्ण छ । देशमा समृद्धि र विकास जनताले भोग्न अझै पाएका छैनन् । आर्थिक समृद्धिलाई क्यास (नगद) मा रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ । प्रजातन्त्रमा आर्थिक विकास दिन्छौं भनेर हिजो जनताको साथ खोज्यौं, तर विकास र समृद्धि टाठाबाठाहरुले मात्रै लिइरहेका छन् । यसलाई विस्तारै बदल्नुपर्ने छ ।
जनताले लाभ पाउने गरी विकास देखिन के गर्नुपर्ला ?
देश विकासको २० वर्षे योजना बनाउनु पर्दछ । देशभित्र भएका अनुभवी व्यक्तिहरु विदेशमा बसी अनुभव प्राप्त जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरुलाई साथ लिएर अघि बढ्नु पर्दछ । दक्ष जनशक्तिको थिङ्क ट्याङ्क बनाएर राजनीतिक योजना र प्राविधिक योजनालाई फ्युजन गरेर मौलिक विकास रणनीति बनाउन आवश्यक छ । देश विकासको लागि अल्पकालिन, तत्कालिक, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्दछ । जनतामा विकासप्रति जोश जाँगर बनाउनुपर्दछ । जनतालाई सरकारले अघि सारेको विकास योजनाको समर्थनमा स्वतःस्फूर्त स्वयम् सेवाको भाव जगाउनु पर्दछ । सबै पार्टी, संघ संस्था, स्थानीय जनतालाई विकासप्रति एकताबद्ध बनाउन आवश्यक छ ।
नेपालको विकासको बाधक कसलाई देख्नुहुन्छ ?
एउटा कुनै ठूलो विकास आयोजना सुरु गर्ने भनेर हल्ला मात्रै चल्नु पर्दछ, भूमाफिया त्यही पुग्छ, दलालहरु त्यही पुग्छन् । सरकारलाई जग्गाको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नै समस्या । बल्ल विकासको लागि ठेक्का लाग्ने भयो भनेपछि चुल्ठेमुन्द्रेहरुको भिड त्यही लाग्छ । हरेक पार्टीका टोलेहरुलाई चन्दा दिनुपर्ने अवस्था छ । विकास आयोजना बन्न खोज्ने वित्तिकै राजनीतिक समुह त्यही पुगेर अड्को थाप्छ, एउटा एक थोक माग्छ अर्कोले अर्को चिज माग्छ, बास्तवमा विकासका अबरोध पु¥याउने कल्चर नै बनेको छ । यसको समूल नष्ट गर्न ठोस योजना बनाउनु पर्दछ । त्यसलाई चिर्न सबैभन्दा पहिला सरकार, राजनीतिक पार्टी, सरकारी अंगहरु र राजनीतिक पार्टीे संगठनभित्रका सबैलाई प्रतिबद्ध बनाउनु पर्दछ । विकास आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको वा चन्दा लिएको थाहा पाएमा प्रचलित कानुनभन्दा दोब्बर सजाय र जरिवनाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ । सरकारलाई यहाँसम्म ल्याएर प्रम ओलीले एउटा इतिहास त रचिसक्नु भएको छ अब अर्को इतिहास विकास र समृद्धि ल्याएर रच्नुहोला, मेरो शुभकामना र आशिर्वाद दुवै छ । अहिलेको घिस्रिने आर्थिक विकासबाट अब उफ्रिने आर्थिक विकासका लागि तयार हुनुपर्दछ । त्यसको लागि योजना बनाउने र लगानी जुटाउने काम गर्न सफल हुनुभयो भने उहाँको अर्को इच्छा पनि पूरा हुन्छ जस्तो लाग्दछ । पहिलो सुझाव सहि र बस्तुवादी योजना बनाउनु पर्दछ । दोस्रो योजनाको कार्यान्वयनमा इमान्दारिता हुनुपर्दछ । बौद्धिक जमातहरुलाई थिङ्क ट्याङ्कको रुपमा विकास गरेर उनीहरुसँग नियमित अन्तरक्रिया सरकारले गर्नुपर्दछ । थिङ्क ट्याङ्कहरुले पनि व्यक्तिगत, राजनीतिक र समुहगत लाभ छोडेर सिंगो देश र जनतालाई हेरेर सरकारलाई सुझाव दिनुपर्दछ । सबै जनता इमान्दार बनौं, आर्थिक समृद्धि अब नजिकै छ ।